१४ औं महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापतिमा उठ्ने बताउँदै आएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्न तयार भएका छन् । संस्थापन इतर समूहबाट साझा उम्मेदवार तय गर्न आफू बाधक नबन्ने कोइरालाले बताएका हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहको चाक्सीवारीस्थित निवासमा मंगलवार दिउँसो भएको छलफलमा शशांकले सभापतिका लागि आफू बलियो उम्मेदवार भएपनि सहमतिका लागि पछि हटेने बताएका हुन् ।
‘सभापतिका लागि म अहिले पनि बलियो उम्मेदवार हुँ, तर एउटै उम्मेदवार बनाउनको लागि म पछाडि हट्न तयार छु’ कोइरालाले भनेका थिए । शशांकले कात्तिक २९ गते सर्लाहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि सभापतिबाट पछि हट्ने संकेत गरेका थिए ।
‘रामचन्द्र पौडेल यसअघि नै उठिसक्नु भएको हो, प्रकाशमानलाई काठमाडौं बाहिरका कार्यकर्ताले चिन्दैनन्, शेखरदा’ले मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो भने म कन्भिन्स हुन्छु’ सर्लाहीको हरिवनमा कात्तिक २९ गते आयोजित कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि शशांक प्राय मौन बसेका थिए ।
शशांक पछि हटेसँगै कांग्रेसमा सभापतिका लागि अब डा. शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह मुख्य दावेदार देखिएका छन् । शशांकले पछि हट्ने संकेत गरेसँगै संस्थापन इतरबाट सर्वसम्मत भए सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका रामचन्द्र पौडेलले सभापतिमा उठ्ने तयारी गरेका शेखर र प्रकाशमानलाई मिल्न आग्रह गरेका थिए ।
‘तपाईंहरू आपसमा मिल्नु भयो भने म मान्न तयार छु’ पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने । शेखर र प्रकाशमानले भने सभापतिमा उठ्ने अडान राख्दै आफूमै सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मंगलवार सहमति नभएपछि बुधवार बिहान पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागि ती नेताले लोकान्तरलाई बताए । आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति र जिल्लाका निवर्तमान सभापतिसहित भोलि बिहान ९ बजे छलफलको समय तय भएको छ ।
‘सभापतिसँगको छलफल पछि उनीहरुको समेत सुझावका आधारमा भोलि साझँसम्म साझा उम्मेदवार तय गर्नेगरी छलफल चलिरहेको छ,’ ती सदस्यले भने । प्रकाशमानको निवासमा नेताहरुको बैठक चलिरहेको समयमा साझा उम्मेदवार तय गर्न भन्दै युवाहरुले दवाव दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन मंसिर २४ देखि काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मंसिर २५ गते मनोनयन गर्ने कार्यक्रम छ । संस्थापन पक्षबाट पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सभापतिको दावेदार छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्तारुढ गठबन्धनलाई व्यंग्य गरेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन कात्तिकमा सारेर आगामी बैशाखमा संसदको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल चलाएकोमा एमाले महासचिव...